Nhau - Jekesa mabasa, simbisa mabasa, uye gadzira mabhenefiti
Jekesa mabasa, simbisa mabasa, uye gadzira mabhenefiti
Kuongororwa kwekuita kwemusangano wega wega ndeimwe yematanho ekambani uye kuyedza kwakakosha pakuvandudzwa kwemubhadharo wekambani. Iyo chete ndiyo nzira yekunyatso kudzora mutengo uye kugadzirisa kukwikwidza kwekambani. Mutengo wezvinhu zvakagadzirwa wawedzera zvakanyanya, uye magetsi uye kushomeka kwemvura kwakadenha zvakanyanya mabhizinesi. Tinofanira kugadzira pfungwa dzedu kuti tiite basa rakanaka rekuongorora mashandiro mumusangano uye nekuwedzera kushanda kwemusangano kuitira kuti kambani ive nenzira yekubuda. Iyo yekuongorora hurongwa inoisa zvibodzwa zvitatu: chinangwa chepasi, chinangwa chakarongwa, uye chinangwa chinotarisirwa. Muchinangwa chimwe nechimwe, zviratidzo zvekutanga-chikamu senge zvinobuda, mutengo, uye purofiti account ye50%, uye zvinangwa zvekutungamira senge mhando, kugadzirwa kwakachengeteka, shanduko yetekinoroji, uye account yakachena yekugadzira ye50%. Kana chinangwa chikaiswa, vatungamiriri vemusangano vanokumbirwa kuti vashande nesimba.
Kuti mabhizinesi akure mukufamba kwenguva, vanofanirwa kudzidzira hunyanzvi hwavo hwemukati, kunyatsoteerera manejimendi, uye kupa huremu hwakaenzana pakuburitsa uye mhando. Iko kusanganiswa kwevaviri hakugone kurerekera. Varairidzi vese vewekishopu vanofanirwa kuzviita vaine hunhu hwakanaka, vatore rese index index zvakanyanya, vagamuchire muyedzo wekambani, uye vagadzire maitiro-anotarisana nemuripo
Kuongorora kwekuita kwegore negore kwemutungamiriri wewekishopu idiki chikamu chekuverenga chinobatanidza kurapwa uye kuongorora mashandiro kuita basa remutungamiriri wewekishopu rive rakajeka uye mabhenefiti ave akananga, kuitira kuti awedzere kushingaira kwebasa uye kugona kwekambani. Ndinovimba kuti nekuramba tichivandudza mashandiro ekuongorora mashandiro, tinogona kuona kuti zvinangwa zvegore rino zvazadziswa. Zvinotarisirwa kuti director wemusangano anogona kushandisa zvakanaka zviwanikwa zvemutungamiri weboka nevashandi uye anoshanda nesimba kugadzira mamiriro matsva mubasa.